BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/31/20140အကြံပြုခြင်း
ကုမ္ပဏီအတွက်ဘီလျံနဲ့ ချီပြီးရှာပေးနိုင်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/30/20140အကြံပြုခြင်း
ကိုနေမျိုးဇင်ရဲ့ ဖုန်းကိုသိမ်းတဲ့ ရဲ
နောက်သို့ ပြန်လိမ့်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ
Written by နေထွန်းနိုင်
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသက်တမ်း သုံးနှစ်အလွန် လေးနှစ်တာကာလ ရောက်ရှိချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြုင်ပြောင်းလဲမှုများ ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်ကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နောက်ပြန်လိမ့်နေသော အခြေအနေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုအခင်းအကျင်းကပင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ထင်ရှားသော အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း Weekly Eleven News ဂျာနယ်က ဖော်ပြလိုက်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်သော လမ်းစတစ်ခုဖြစ်သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ လမ်းခုလတ်မှာပင် ရပ်တန့်နေခဲ့ခြင်း၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ကြွေးကြော်မှုဖြင့် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွက် တိုက်တွန်းမှုများ ရှိခဲ့သည့်တိုင် အယောင်ပြနိုင်ငံရေး ထိပ်သီးတွေ့ဆုံ ထမင်းစားဝိုင်းသာ ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း အပြီးသတ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းခဲ့သော တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးမှု ဖြစ်မလာခဲ့ခြင်း၊ မရေရာသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့် အတူ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ခိုင်မာသော ကတိက၀တ်များ မရရှိခြင်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံ နောက်ပြန်လိမ့်ခြင်းကို ဖော်ညွှန်းနေခဲ့သည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု လျော့ကျနေဆဲဖြစ်ပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်သော အဖြစ်အပျက်များ၊ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် မျှတမှု မရှိခြင်းများ အပါအ၀င် တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့လာသည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်များ ရှိလာသည့် တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်အပေါ် မကျေနပ်မှုများ၊ လွှတ်တော်အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြသည့်တိုင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးသည့် လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု ပြဿနာများ၊ ဘာသာရေးအကြောင်းပြ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ဆက်ရှိနေခြင်း၊ လယ်သမားများစွာ တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရခြင်းများ၊ ဂျာနယ်လစ်များကို အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တရားစွဲဆို၊ ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချခြင်းများ အစရှိသည်တို့ကလည်း ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ပုံစံများအတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် သန်း ၆၀ သော မြန်မာလူထု အားလုံးအတွက် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးခံစားခွင့်များ ဖြစ်မလာခဲ့ဘဲ အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာပန်းလှရုံသာ ဖော်ဆောင်မှုများ ဖြစ်သည်ဆိုသော ပြည်သူလူထု၏ ခါးသီးချက်များမှာလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း သိသိသာသာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အပါအ၀င် အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပိုမိုဝင်ရောက် ခဲ့သော်လည်း ထိုရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်မှာ မြန်မာလူထုနှင့် ဝေးကွာခဲ့သည်။
ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံစားဝတ်နေရေး ပြဿနာမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့သည်။ အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ညွှန်းကိန်းများအရပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများမှာ ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြင့်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ နေရာထိုင်ခင်းအတွက် အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းများကို အစိုးရက တရားဝင် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော်လည်း တရားဝင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အိမ်ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများပင်လျှင် ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်နှစ်ထက် မြင့်မားလာခဲ့သည်။ ထိုကိန်းဂဏန်းများကလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်သူ လူထုများ ပိုမိုဆိုးရွားသော စားဝတ်နေရေး အကျပ်အတည်းအတွင်း ရောက်ရှိနေသည်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ရပ်တန့်နေကြောင်း တရားဝင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အတူ အစိုးရအနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ယခုထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများက ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အကြားတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ကိုင်ရသည့် အခြေအနေအပေါ် ဝေဖန်မှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး အခြေခံ အဆောက်အအုံ အပြည့်အစုံ မရှိခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းချက်များနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ရှိနေသဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲ တွေ့နေကြောင်း ပြောကြားလာကြသည်။
Transparency International အဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ညွှန်းကိန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခြစားမှုညွှန်းကိန်းမှာ စုစုပေါင်း ၁၇၄ နိုင်ငံ ရှိသည့်အနက် အဆင့် ၁၅၆ တွင် ရှိနေသည်။
ထိုပမာဏသည် ယခင်နှစ် ညွှန်းကိန်းထက် တိုးတက်လာသည် ဆိုသော်လည်း အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် အနိမ့်ဆုံး ရောက်ရှိခဲ့သော အဆင့်ဖြစ်သည်။ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံအနက် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှာ အဆင့်တူအနေဖြင့် ခြစားမှုအဆိုးဆုံး နိုင်ငံများစာရင်း ၀င်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းက ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ဖော်ပြခဲ့သော စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အဆိုးဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်း၌လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၄၆ နိုင်ငံစာရင်းတွင် အဆင့် ၁၄၃ ၌ ရှိနေခဲ့သည်။
ထိုအချိန် မတိုင်မီက ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Economic Freedom ညွှန်းကိန်းများအရလည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆိုးဆုံးနေရာတွင် ရှိနေပြီး နိုင်ငံ ၁၆၅ နိုင်ငံအနက် အဆင့် ၁၆၂ တွင် ရှိနေခဲ့သည်။
ထိုကိန်းဂဏန်းများကို တွက်ချက်ရာ၌ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ တီထွင်မှု၊ အခွန်၊ နည်းပညာ၊ ခြစားမှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် အကာအကွယ် ပေးနိုင်မှုများကို မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အချက်တစ်ခု အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (CPJ) ၏ ညွှန်းကိန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဂျာနယ်လစ်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချမှု အဆိုးဆုံး ဆယ်နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါဝင်နေခဲ့ပြီး အီဂျစ်နှင့် ဆီးရီးယားတို့အပြီး နံပါတ်(၈)နေရာတွင် ရှိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စိန်ထွေးကို တောင်ဒဂုံ တရားရုံးမှအပြန်တွင်
သတင်းဓါတ်ပုံ- Kyaw Lwin
လက်ပတောင်းသို. ထွက်ခွာလာသော ကိုနေမျိုးဇင်နှင့်
အဖွဲ.အား ရွာသာကြီး စိတ်ကျန်းမာရေး လမ်းဆုံအရောက်တွင်
ရဲအင်အားများစွာ ပိတ်ဆို့ ထားကာ တားဆီးခဲ့ကြကြောင်းနှင့်
ကိုနေမျိုးဇင်အား ဒဂုံမြို့နယ်စခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း
လုပ်နေတဲ့ ဥပဒေအထက်ကလူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ
ပုဒ်မများမှာ ၂၉၄ ၅၀၆ ၅၀၅(ခ)/၁၁၄
၃၅၃ ၂၄၇ တို့ ဖြင့်အာမခံမပေးပဲ
ရီမန်ကြီးတစ်ပတ်(၁၄ ရက်)် ချုပ်မိန့် ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ကိုနေမျိုးဇင် မနော်အုန်းလှ မစိန်ထွေးတို့ အား
ထိုအထဲတွင် တင်ထွဋ်ပိုင်ပါ ပါသည်
Nay Myo Zin ဒဂုံရဲစခန်းသို့ နောက်နာရီဝက်ခန့်တွင် ရောက်ပါမည်။ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုပြီး နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့တောင်းဆိုမှုဖြင့် နိုင်ငံတော်ရဲများ၏ ဖမ်းခေါ်ရာနောက် ဒဂုံရဲစခန်းသို့ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖွင့်ပြီး အဖမ်းခံလိုက်သွားပါသည်။
ဒေါ်နော်အုန်းလှကို ယနေ့မနက် သူနေထိုင်တဲ့ ရန်ကုန် စမ်းချောင်းမြို.နယ်အိမ်ရှေ.မှာ ဖမ်းဆီးသွားပြီး၊ စမ်းချောင်းရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ လူအင်အားရာချီရှိတဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကို မြန်မာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဦးဆောင်သူ ကိုနေမျိုးဇင်၊ အမျိုးသမီးကွန်ယက်က ဒေါ်နော်အုန်းလှနဲ. ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ.မှ ဦးဘမြင့်တို့ ဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
သတ္တုတူးဖော်နေတဲ့နေရာတွေကို ၀င်ရောက်ကြည်ရှုခွင့် ငြင်းပယ်ခံ
လက်ပံတောင်းတောင် အဓိကရုဏ်းဟာ သမ္မတထံ တင်ပြခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်ထည်မဖော်တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပွားရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး အစီရင်ခံစာရေးသားခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က စံနှုန်းတွေနဲ့ အညီ အကြံပေးခဲ့ ပေမယ့် လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖော်တဲ့သူက ဆက်မလုပ်တဲ့ အတွက် မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်သိပံ္ပအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးစိုးသူရထွန်း က ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်သိပံ္ပအဖွဲ့ဟာ ကော်မရှင်တာဝန်ပေးချက်အရ ကြေးနီစီမံကိန်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဘက်က စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စိစစ်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လမှာ သမ္မတထံ ဒီအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့ပြီး သမ္မတက အဲဒီနေ့မှာပဲ အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့သဘာဝပ၀တ်ဝန်းကျင်သိပ်ပံပညာရှင် သုံးဦးနဲ့ ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်တို့ဟာ ကြေးနီစီမံကိန်းနယ်မြေက မြန်မာ-၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရုံးရှိရာကိုသွားရော­က်ပြီး လက်ရှိသတ္တုတူးဖော်နေတဲ့နေရာတွေကို ၀င်ရောက်ကြည်ရှုခွင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြရာမှာ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခံရသူ ပညာရှင်သုံးဦးကတော့ ဦးစိုးသူရထွန်း၊ ဦးငွေမိုးနဲ့ ဦးမင်းတင် သုံးယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုလဲပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်
ကို ဝင်ခွင့် မပေးနိူင်ပါဘူး ကျွန်တော် လုံခြုံ ရေး အရာရှိချုပ်ပါ ဆိုပြီး ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဂိတ်ပေါက်
ကနေ ပြောဆိုသူသည် ယခင် မီးလောင်ဗုံး ပစ်စဉ်က မုံရွာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ သူ ဦးတင်ထွန်း ဖြစ်နေပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/28/20140အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်ခင်ဝင်း သေမှု၊ သေခင်းအမှုဖွင့်ရန်ဆာလင်းကြီးရဲစခန်းသို့ သွားရောက်ရုပ်သံ
“ ၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)၊ မန္တလေး
ဘဝအလင်း ဆရာတော်ဦးသောဘိတ ဦးဆောင်သော ရွှေဝါရောင်
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ မိုးကြိုးပြင်ရွာသူ ဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံး
ခဲ့ရခြင်းအား မိသားစု၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် သေမှု၊ သေခင်းအမှုဖွင့်ရန်
ဆာလင်းကြီးရဲစခန်းသို့ သွားရောက်၍ မိသားစုဝင်များအား ကူညီ
ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ရုပ်သံမှတ်တမ်း ”
အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်မှာ စည်ပင်ကိုယ်စားလှယ်မဲ ရင်ဂိုကို ထည့်ခွင့်မပေး
ရန်ကုန်တိုင်းစည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီရွေးကောက်ပွဲတွင် အလယ်ရွှေဂုံ တိုင်ရပ်ကွက် ဗဟန်း မြို့နယ်နေတွင်ထိုင်သူ အနုပညာရှင် ဂီတအဆိုတော် ရေဂိုက
ဆန္ဒမဲပေးရန် ယနေ့ညနေ ၂နာရီ၄၅ မိနစ်တွင်
သွားရောက်ပေး ဆောင် သော်လဲမဲပေးခွင့်မရရှိခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနဲပပတ်သက်ပြီး ရင်ဂိုကို ပေါ်ပြူလာနယူးမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။
မေး- ဦးရင်ဂိုမဲပေးပိုင်ခွင့်မရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ- ဟုတ်တယ်။ ညနေ၂ နာရီ ၄၅မိနစ် မှာဦးနေထိုင်တဲ့ အလယ်ရွှေဂုံ
တိုင်ရပ်ကွက် ဗဟန်းမြို့နယ်က မဲရုံကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခြံဝ ရောက်
ရောက်ခြင်းမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဦးရင်ဂိုကိုပြောတယ်။ မဲပေးဖို့
ခင်ဗျားမပါဘူးဆိုပြီးပြန်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီအပြင် ဘေးကကလေး ကိုပြောသ
လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းကိုပြောတယ်။ ရှင်းပြနေတာနားမ လည်
ဘူး လားပြာတယ် ။ဒါတွေထားပါ သူ့ဟာသူဘာပြောပြောပါ။
မေး- ဦးရင်ဂိုက မဲကိုဘာကြောင့်ပေးခွင့်မရတဲ့အကြောင်းကိုရော မေးခဲ့သ လား။
ဖြေ- ကျွန်တော်ဘက်က ဘာကြောင့်ပေးခွင့်မရတာလဲ ဖြေရှင်းခိုင်းတော့ ဦးတို့က
ရက်ကွက်ထဲမှာ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးတွေဒီရပ်ကွက် ဒီနားက လူတွေ
စိတ်မ၀င်စားမှုမရှိလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က ပြည်သူတစ်ယောက်ပဲ။
ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ လုပ်မယ့် လူတစ်ယောက်ကို ကြိုက်တဲ့လူကို
ရွှေးထည့်နိုင်တယ်။ ဘာလို့ပေးမထည့်တာလဲမေးတော့ သူကပြောတယ် “ကျွန်တော်က ၂
လလောက် ကတည်းက လုပ်နေရပါတယ် စည်ပင်သာယာက စာရွှက်ကိုရမှ” ဘာညာတွေ
မဟုတ်တာလျှောက်ပြောနေတယ်လေ။ဦးက မီဒီယာတွေ ကိုခေါ်လိုက်တော့ရောက်လာကြတယ် ။
အလုံးလုံးအထွေးထွေးတွေပဲပြောတယ်။ သူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိဘူး ။ လူကတော့
၀၀တုပ်တုပ်ပုံစံပါ။ တစ်အိမ်မှာ တစ်ယောက်ဆိုလို့ ဦးတစ်ယောက်တည်းသွားတာပဲ။
မေး- ယခုကိစ္စနဲ့နိုင်းယှဉ်ပြီး ခုလိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း
သွားနေတဲ့အခါမှာ တရားမျှတမှုနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နည်းနေသေးတဲ့အပေါ်ကိုရော
ဖြေ- တခြားရပ်ကွက်၊ တခြားလူတွေကို
ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဦးနဲ့ထိပ် တိုက် တွေ့တဲ့ ဦးနေထိုင်တဲ့ အလယ်ရွှေဂုံ
တိုင်ရပ်ကွက် ဗဟန်းမြို့နယ်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပဲပြောတာပါ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိလို့ရှင်ရင် တိုင်းပြည်က စုတ်ပြတ်သပ်နေအုံးမှာပဲ။
ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်း လာစရာ မရှိဘူးလို့ မြင်တယ်။ ဦးရင်ဂိုတို့က
ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ်။ ကိုယ့်သီချင်းကိုယ်ဆိုပြီး ထမင်းစားရတဲ့
လူတွေပါ။ ဘာမှ မကောင်းမှုမလုပ်ဘူး။ အဲဒါသွားပြောတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့
Volunteer လို့ပြောတယ်။ Volunteer လားရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေ။
တစ်ကယ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ထွက်ခဲ့စမ်းပါ။ ကျွန်တော်က
ဘယ်သူ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ မဲသွားထည့်တာ
Air Asia ခရီးစဉ် QZ8501 အဆက်ပြတ်ပြီး ပျောက်ဆုံး
အင်ဒိုနီးရှားက စင်္ကာပူကို ပျံသန်းလာတဲ့ Air Asia ခရီးစဉ် QZ8501 ဟာ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ အဆက်ပြတ်ပြီး ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ စုစုပေါင်း ၁၆၂ ဦး ပါသွားပြီူး အများစု က အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား လူမျိုး သုံးဦး၊ ပြင်သစ်၊ မလေးရှားနဲ့ စင်္ကာပူလူမျိုး တစ်ဦးစီ ပါတယ်လို့ လေကြောင်းလိုင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ် မပြတ်မီ လေယာဉ်ဆီက ရာသီဥတုဆိုးလို့ လမ်းကြောင်းပြောင်း ပျံသန်းခွင့်တောင်းခံတာလည်း လက်ခံရရှီခဲ့တယ်လို့ လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေး အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံကလည်း ပျောက်နေတဲ့ AirAsia လေယာဉ်ရှာဖွေရေးမှာ လေယာဉ်တွေ၊ ပင်လယ်ပြင် ကင်းလှည့် သင်္ဘောတွေနဲ့ အကူအညီပေးနေပါတယ်။ AirAsia Indonesia က QZ8501 လေယာဉ်ပေါ်ပါသွားသူ လူ စာရင်းကို နောက်ဆုံးသိရသမျှ အခုလို ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
" ဇော်လင်း တမှု လွတ်ပြီ"
တရားရုံးမနက်ပိုင်းမှာ ရှေ့ နေ အပြောင်းအလဲ ကိစ္စ တွေ လုပ်ကြပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ ၀င်းနဲ့ဇော်တို့ရဲ့ ရှေ့ နေတွေ ရည်ရွူယ်ချက်ရှိရှိ သိမ်းထားတဲ့
ဇော်လင်း ရဲ့ ပက်စပို့စ်စာအုပ်ကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အ ချက် အချိန်မှာတော့
တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်မှု ဆိုတဲ့ ထင်ရာ မြင်ရာ စွဲချက်တင်တဲ့ ထိုင်းရဲ တွေ
စွဲချက်ကို ကိုယ်စားပြုရတဲ့ အစိုးရရှေ့ နေ အဘို့ မအီမသာ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
26.12.14 ( ကော့စမွေ တရားရုံး)
" ကျနော်တို့ နဲ့ အတူ သားလေးကိုပြန်ခေါ်သွားရမယ် လို့ ထင်ခဲ့တာပါ။
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးခင်ဗျာ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဘုရင်ကြီး ဖြစ်ပါစေ"
(ဦးထွန်းထွန်းထိုက် ( ဝေဖြိုး အဖေ)
" ဘုန်းဘုန်း ၃ ပါး ကြွရောက်ခြင်း နှင့် အာမခံကိစ္စ"
ဒီနေ့ ထိုင်းနှင့် မြန်မာဘက်ခြမ်းက ဘုန်းဘုန်း ၃ ပါးဟာ တရားရုံးမှာ
မိန့် မိန့်ကြီး ထိုင်နေပုံနဲ့ ခဏတာ အားလပ်ချိန်လေးမှာ ၀င်းနဲ့ဇော်တို့က ဘုန်းဘုန်းတပါး ကို ဦးချ ရှိခိုးကြပုံ တွေကတော့ တဖက် မှာ ရှိတဲ့ရှေ့ နေတွေနဲ့
တရားသူကြီးကို မင်သက်သွားစေမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်တယ်။
အမှန်တရားအတွက် လုံးဝမကြောက်ပဲ ရင် ဆိုင်သွားဘို့ ဘုန်းဘုန်းက အားပေးစကားမြွက်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။
အာမခံကိစ္စကို ၀င်းနဲ့ဇော်တွက် ကြီုး စားကြမှာဖြစ်ပေမယ်လည်း ရဘို့ မျှော်လင်ချက်နည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရက်ရွှေ့ခြင်းဟာ ၀င်းနဲ့ဇော်တို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ သက်သေရှာဘို့ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ အခွင့် ရေးလို့ ပြောကြပေမယ့် ၀င်းနဲ့ဇော်တို့ လည်း ဇွဲရှိကြဘို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူ ဘန်ကောက်နှင့် ကော့ဖငန်မှ အနောက်နိုင်ငံသား ၃ဦး လည်း ယခု လို တက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ပိုအားရှိစရာဖြစ်စေပါတယ်
၂၆.၁၂.၂၀၁၄ ကော့စမွေ တရားရုံး
( ဘာလို့ မဟုတ်ပဲ နဲ့ ၀န်ခံတာလဲ လို့ သိချင်သူတွေကို အောက်ပါ စာကိုဖတ်ရင်ရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ပိုရှင်း ချင်ရင်တော့ ရေပတ်လည် ၀ိုင်းနေတဲ့ ကော့တောင် ကျွန်းက မာဖီယာ တွေ ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ထိုင်းရဲ တွေကို ကျနော်တို့ ညီငယ် ၂ ယောက် အကြောက်လွန် ၀န်ခံခဲ့တာ မဆန်းပါဘူး။)
ဒီအမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နခွန်းချွန်ဖူး ချပ်က “ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ နှစ်ဘက်သက်သေတွေ စာရင်းကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ သက်သေစာရင်းကတော့ တဖက်နဲ့တဖက် ယုံကြည်မှု နည်းကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်သက်သေတွေ ယူလာပါတယ်။ သက်သေတွေကို နောက်နှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်စစ်ဆေးမယ်။ တရားလိုဘက်က ၁၂ ရက် စစ်ဆေးမယ်။ တရားခံဘက်က ၆ ရက် စစ်မယ်။ တရားလိုဘက်က သက်သေ ၆၀ ကျော်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ၃၀ ကျော်ရှိတယ်။”
တရားသူကြီးက ဒီကနေ့ တရားခံလူငယ် ၂ ဦးကို ကျူးလွန်မှု ရှိမရှိ၊ မရှိဘူးဆိုရင် ကျူးလွန်သူကို သိက ဖြေကြားရန် နှစ်ကြိမ်ထပ်မေးတယ်လိုိ့ဆိုပါတယ်။
နခွန်းချွန်ဖူးချပ်က “တရားသူကြီးက ဒီနေ့ထပ်မေးတယ် မင်းတို့ လုပ်သလားလို့ မေးတယ်။ ကျနော်တို့ မလုပ်ဘူးလို့ ဖြေတယ်။ ဒါဆိုရင် မင်းတို့သိလား ဘယ်သူလုပ်လဲလို့ မေးတယ်။ မင်းတို့သိရင်လည်း ပြောပြပါဦးလို့ ပြောတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်း ကျနော်တို့လည်း ဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတာ မသိဘူးပြောတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ အရက်သောက်တယ်၊ မူးတယ်။ အိမ်ပြန်အိပ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ တရားသူကြီးက နောက်တခါမေးတယ်။ ဖြေဖို့ မကြောက်ပါနဲ့လို့ ဖြည့်ပြောပါတယ်။ ကလေးတွေကလည်း ခုနလိုပဲ ပြန်ဖြေကြတယ်။ အဲလောက်ပါပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
Credit >> DVB
"ဇူလိုင် ၇ ရက် 2015 သို့ ထပ်မံရွှေ့ လိုက်တဲ့ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု"
၁။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် ကော့စမွေ တရားရုံး တွင် မနက် ၁၀ နာရီ စခဲ့ပါတယ်။ မိဘများ နဲ့ သံရုံးအဖွဲ့တွေ ကတော့ အကြောင်း အမျိုး မျိုး ဖြင့် ၁၁နာရီမှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂။ တရားရုံးထဲသို့ မိဘများ ရောက်သော အခါမှာ ၀င်းဇော်ထွန်း၏ ဖခင် နှင့် မိခင်တို့ ၏ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲ စွာ ငိုကြွေးမှု သည် အားလုံး၏ အသည်း နှလုံးကို ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သလြို ဖစ် သွားခဲ့ပါတယ်။
မိခင် ၂ဦး တရားရုံးထဲတွင်သား ငယ် ၂ ဦး ကို နောက်ကျောမှ တချိန်လုံးထွေးပိုက် ထား နေတဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ တရားသူကြီးကိုပါ မင်သက်သွားစေပြီး ၀င်းနှင့်ဇော်ဟာ လျှစ်လျှူရှု ခံရတဲ့ လူငယ်၂ဦး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တက်ရောက်လာကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများကိုပါ သတိထားမိသွားစေပါတယ်။ ထို့အပြင် မတရား စီရင်မယ့် တရားလို ရှေ့ နေ နဲ့ တရားသူကြီး တို့ကို စာနာစိတ် ဆိုတဲ့ သတိပေးခေါင်းလောင်း နှိုး ဆော် လိုက်သလိုလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၃။ ၂ဖက် သက်သေတွေနဲ့ သက်သေခံပစ္စည်း တွေကို တင်ပြကြသည့် အခါမှာတော့ ထူးခြားစွာပဲ မြန်မာ လူမျိုး ဖြစ်သူ အိုကြီး ကတော့ ပေါက်တူး နဲ့ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စကို ထိုင်းရဲဘက်ကနေ သက်သေထွက်ဆိုပေးမယ်လို့ ၀မ်းနည်းစွာ သိလိုက်ရပါတယ်။
၄။ တရားလို ရှေ့ နေတွေဘက်က ရှည်လျှားတဲ့ CCTV ပရင့် ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်များနဲ့ CDအချပ် ၂၀ ကိုလည်း ရုံးတော်မှာ တင်ပြခဲ့တာ တွေ့ပါတယ်။
၅။ မနက် ၁၀ နာရီကတည်းက အစပြုခဲ့ပြီး နေ့လည့် ၁ နာရီ လောက်သာ နားခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၆ နာရီမှသာ အပြီးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/26/20140အကြံပြုခြင်း
တွေ့ခဲ့ရသော ကလေးငယ်လေးတို့ ဘဝ
ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးခဲ့မှု သေမှုသေခင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်း/ပွင့်)မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်
၈၈မျိုးဆက်( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း) မှ ကိုဥာဏ်လင်း၊ မနီလာသိန်း၊ မမီးမီး၊ မနုနုအောင်၊ မနန်းစော၊ မကြူကြူခိုင် မသဉ္ဇာခိုင်တို့သည် လက်ပံတောင်း တောင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရမှုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများအား အကူအညီ ပေးရန်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား အကူအညီပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ပံတောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး လက်ပံတောင်း တောင်သူဒေါ်ခင်ဝင်း အသက် (၅၆)နှစ် သေဆုံးမှု ဆာလင်းကြီးရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ရာတွင် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ပထမတွင် ဆားလင်းကြီး ရဲစခန်းမှ အမှုမဖွင့်ပေးသေးပဲ ၂း၀၀ ကျော်ကြာ အခြေအတင် ပြောဆို ဆွေးနွေးပြီးမှ ဆာလင်းကြီးရဲစခန်း စခန်းမှူး (ဒုရဲမှူး) သန်းနိုင်မှ သေမှုသေခင်း ၄/ ၂၀၁၄ ဖြင့် FIRဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးအမှုဖွင့်ရန် ပြန်လည်သည်ယူလာခဲ့သော ဒေါ်ခင်ဝင်း၏ ရုပ်အလောင်း ကို ဆာလင်းကြီး ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်လက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ဒေါ်ခင်ဝင်း
၏ ရုပ်အလောင်းကို မှုခင်းဆရာဝန်များ စစ်ဆေးနိုင်ရန် မိုးကြိုးပြင်ရွာမှ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ယမန်နေ့ည ၉ နာရီက ရွှေ့ပြောင်း
လိုက်ပါသည်။ ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ
နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ဆားလင်းကြီးဆေးရုံရှိ ရင်ခွဲရုံတွင် မုံရွာဆေးရုံ အုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ညွှန့်သန်း၊ မုံရွာ မှုခင်းဆရာဝန်ခံ ဒေါက်တာတင်နွယ်၊ ဆားလင်းကြီး ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာတင့်လွင်၊ ဆားလင်းကြီးရဲစခန်းစခန်းမှူး ( ဒု-ရဲမှူး) သန်းနိုင်နှင့်( ဒု-ရဲအုပ်) ပြည့်ဖြိုးသူ တို့မှ ဆေးစစ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး
သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာတင်နွယ်မှ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအခါ လက်ပံတောင်း တောင်သူဒေါ်ခင်ဝင်း အသက် (၅၆)နှစ်၏ ရုပ်အလောင်းကို ဆားလင်းကြီးဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံမှ ပြန်လည်သည်ဆောင်ပြီး မိုးကြိုးပြင် (လယ်)ရွာ သချိုင်္င်းတွင် ဂူသွင်း သဂြိုင်္ဟ်မည်ဖြစ်သည်။
တုံရွာနေရာကိုလည်း ခြံစည်းရိုးဝင်းအပြည့် ခတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တပ်မတော် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိ
ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၃ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တပ်မတော်ဘက်မှ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ MPC နှင့် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့က ကြိုတင်ဖိတ်ကြားမှု မရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းဗဟိုဌာန (MPC)တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC) နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) တို့ တွေ့ဆုံပွဲကို ၂ ရက်တာ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်မှ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်း တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ၄င်းသည် လက်ရှိတပ်မတော်မှ အငြိမ်းစားယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်းမှာ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တစ်ဦး အနေဖြင့် သာ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် တပ်မတော်ဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုကျင်းပခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်ဘက်မှ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တပ်မတော်၏ ပါဝင်မှုသည် အလွန်ပင်အရေးကြီးသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် တပ်မတော်အား ဖိတ်ကြားရန် လိုအပ်သည်ဟု တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့မှ ထောက်ပြမှုများရှိနေသည်။
“MPC နဲ့ ဦးအောင်မင်းက တပ်မတော်ကို မဖိတ်ဘူးလို့ ကြားတယ်။ ဘာသဘောနဲ့ တပ်ကို မဖိတ်တာလဲတော့ မသိဘူးပေါ့၊ တကယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အဓိကကျတာ တပ်မတော်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာ ပဲလေ၊ အဓိကကျတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေက တပ်မတော်နဲ့ဆွေးနွေးမှ ပြေလည်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ တပ်ကမပါဘဲနဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘာတွေ ဘယ်လို ဆွေးနွေးကြမလဲတောင်မသိဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ MPC အနေနဲ့ရော ဦးအောင်မင်းအနေနဲ့ကပါ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားတဲ့သဘော သက်ရောက်တဲ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အချိန်ဆွဲတဲ့သဘောပါ သက်ရောက်နိုင်တာပေါ့” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး က ဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သူ၏အမြင်ကိုလည်း သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
UPWC နှင့် NCCT တို့၏ဆွေးနွေးပွဲအား နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ ဆွေးနွေးပွဲမကျင်းပမီ နိုင်ငံတော်သမ္မထံသို့ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့ကတည်းက တက်ရောက်စေမည့် အမည်စာရင်း၌ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များအား ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ UPWC မှ ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်(၆) ဦးနှင့် NCCT မှ ဖဒိုကွယ်ထူးဝင်းခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် (၈) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတ္တုတူးဖော်နေတဲ့နေရာတွေကို ၀င်ရောက်ကြည်ရှုခွင့် ငြင...
ဒေါ်ခင်ဝင်း သေမှု၊ သေခင်းအမှုဖွင့်ရန်ဆာလင်းကြီးရဲစခန်...
အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်မှာ စည်ပင်ကိုယ်စားလှယ်မဲ ရင်...
ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးခဲ့မှု သေမှုသေခင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၈...
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တပ...